नेताका गलामा कोरोना भगाउने जन्तर , कसले दियाे त ? - NepalTale
नेताका गलामा कोरोना भगाउने जन्तर , कसले दियाे त ?
नेपाल टेल	प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १३, २०७७ समय: ८:४५:२६
नेकपाको बैठकमै बाँडियो कोरोना जन्तर!
Posted by Nepal Tale on Friday, 26 June 2020
चिकित्सकहरु भने कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने कुनै औषधि र प्रविधि विकास नभएको बताउँछन् । ‘कोरोना भाइरस नसर्ने र सरे पनि निको हुने कुनै पनि डिभाइस बनेको छैन । कुनै पनि किट वा कार्डलाई भाइरस मार्न योग्य हुने भनेर आधिकारिक निकायले मान्यता दिएका छैनन्,’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै पनि वस्तु औषधि वा प्रतिरोधात्मक हो वा होइन भन्नलाई त आधिकारिक संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । प्रमाणित नभएको किट लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा हुन सक्छ । किट लगाएरै कोरोना सर्दैन भने त ढुक्कसँग लगाए भइहाल्यो नि । मास्क लगाउनु पनि पर्दैन । दूरी कायम गर्नु पनि पर्दैन ।’ याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।